3GP bụ a format n'ozuzu iji ya iji chekwaa vidiyo na 3G mobile igwe. Mgbe ụfọdụ, mgbe ị na-vidiyo na gị smart ekwentị, ha nwere ike anya elu n'akụkụ ala n'ihi na gị smart ekwentị flipped vidio-akpaghị aka. Na nke a, ị ga-ahọrọ bugharia 3GP videos 90 degrees ka mma ikiri. A bụ ndepụta nke n'elu 5 free 3GP video rotators.
Movie Rotator 2.0 bụ emelitere version nke Movie Rotator. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na Windows 7 na 8 na-enyere gị bugharia vidiyo na nanị otu ole na ole clicks. Na mgbakwunye na 3GP, software na-akwado ndị ọzọ formats dị ka AVI, mpg, Flv, MP4, WMV, MOV na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Video Rotator bụ ihe ngwa maka flipping obere vidiyo 90 ogo klookwaisi, kehoraizin mirror, anticlockwise, ma ọ bụ isi-ala. Usoro ihe omume na-akwado n'elu 15 ewu ewu video ọsọ ọsọ formats nke na-agụnye 3GP, mpg, AVI, FLV, WMV, MOV na MP4, wdg Video Rotator ohere ọrụ na-na-ịzọpụta na-agba gburugburu videos n'ime 5 na-ewu ewu video formats: mpg, Flv, MP4, AVI , na MOV. Nke a na usoro-akwado ogbe mode nke na-enyere ndị ọrụ na-enwe ike iji tụgharịa & bugharia videos na nnukwu.
N'ụzọ kwụ ọtọ na mfe na-eji;
Nwere ike bugharia Videos na Bulk.
Ọ dịghị preview.
Na Free Video tụgharịa, ị nwere ike tụgharịa ma ọ bụ bugharia video na a òké click. Ọ na atụmatụ dị iche iche predefined presets na i nwere ike bugharia video site 90 degrees, 180 degrees na klookwaisi na mgbochi klookwaisi direction. Ma ọ bụ tụgharịa video ekwesị nakwa dị ka horizontally ime ka ndị ọzọ mgbazi na mbụ video ma ọ bụ na-agba gburugburu video.
Na-adọrọ mmasị onye ọrụ-interface.
Ọ na-enye iji wụnye a otutu nke na-achọghị ngwa.
Freemake Video Ntụgharị bụ ihe karịrị nanị a video Ntụgharị. Ọ na-enyekwa a nnọọ mfe ụzọ ka ị na-agbanwe adiana nke gị na fim. Ọ na-akwado dị iche iche video formats dị ka MOV, AVI, MP4, WMV, MKV, 3GP na ndị ọzọ. Ozugbo ị na-aga, ọ bụ mfe iji, n'ụzọ kwụ ọtọ na gbalụ gbalụ.
Ọ bụla video Ntụgharị atụmatụ a dị mfe na-eji interface. Ọ ọbụna-enyere gị aka bugharia na batches ma na-eme ụfọdụ smart edezi dị ka trimming, cropping, clipping dị ka mma. Ọ bụ a bit nke niile na-abụ abụ, ihe niile na-agba egwú n'usoro n'usoro software dị ka ọ na-akwado a nnukwu ego nke faịlụ formats, gụnyere 3GP n'ezie.
Wondershare Video Editor Bụ oké usoro ihe omume 3GP adiana. Na dị nnọọ ụfọdụ clicks, ị nwere ike bugharia videos nkịtị ikiri ọnọdụ. Ị na-adịghị na-enwe ike bugharia gị videos 90 degrees na ndị ọzọ klookwaisi ma ọ bụ anticlockwise, kamakwa akpa ogho ha ekwesị na horizontally. Ọ nwere ngwa ngwa adiana ọsọ na ọ ga-esi mgbanwe na-enweghị tarnishing mbụ mma. Na mgbakwunye na 3GP, software akwado ndị ọzọ formats dị ka MOV, ASF, Flv, VOB, WMA, MP4, WMV, AVI, MKV, mpg na ọtụtụ ndị ọzọ.